Qaar ka mid ah Soomaalida Qurba Joogta ah oo kulan loogu qabtay Nairobi.
» Qaar ka mid ah Soomaalida Qurba Joogta ah oo kulan loogu qabtay Nairobi.
Kulan ay soo qaban qaabisay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhanka Horumarka ( UNDP ) ayaa waxaa uu ka dhacay Hotelka Hilton ee magaalada Nairobi.
Waxaana si wayn loogu lafa guray doorka wanaagsan ee qurba joogta Soomaalida ay ka qaadan karaan horumarinta iyo gargaarka shacabka Soomaaliyeed.
Qaramada Midoobay waxay aad u ammaantay doorka Qurba Joogta oo ay ku tilmaantay inuu yahay mid wax ka taray hawlaha gargaarka Bini’aadannimo ee loo fidiniyo dadka ku dhibaataysan ee gudaha dalka iyo dibaddiisaba.
Madaxa Hay’adda UNDP uu qaabilsan wadamada Soomaaliya iyo Kenya Mr. Alvaro Rodriguez oo waraysi gaar ah siiyay shabakadda caalamiga ah ee Hiiraan Online ayaa tilmaamay inay fikradaha ay ka aruuriyaan qurba joogta ay hordhigi doonaan wadamada deeqda bixiya si gargaar bini’aadannimo oo dhinac walba taabanaya loo gaarsiiyo dadka Soomaalida ah ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinka dagaallada, fakhriga iyo jirrooyinka.
Dadkii halkaas khudbadaha ka jeediyay waxaa ka mid ahaa Ibraahim Abiikar oo ahaan jiray duuliyaashii Soomaaliya haatanna ku nnool Qurbaha, waxaana uu ku boorriyay waalidiinta dhalinyarada Qurba Joogta ah inay is-faham la yeeshaan ilmahooda si looga hortago in caruurtooda loo adeegsado dagaallada Soomaaliya.
Xaliimo Ismaaciil Ibraahim ayaa iyaduna codsatay in hay’adaha Qaramada Midoobay aysan diiradda saarin oo kaliya gobollada Puntland iyo Somaliland balse ay hawlahooda gaarsiyaan meelaha kale ee nabadda ah sida Gal-mudug iyo Ximin iyo Xeeb.
Prof. Xussein Axmed Warsame ayaa isna taabtay sida loogu baahanyahay Soomaalidu inay wax bartaan kuna dadaalaan waxbarshada ilmahooda oo uu ku sheegay waddada kaliya ee xal loogu heli karo Soomaaliya.
Qaar ka mid dadkii halkaas ka hadlay waxaa ay tilmaameen doorka gurracan ee qaar ka mid ah Qurba Joogtu ay ka qaataan arrimaha Soomaaliya sida lacagaha loo dirayo dhinacyda dagaallamaya iyo qabaa’ilka oo la hubaynayo arrintaas oo ay ka digeen.
Ugu dambayntiina waxaa lagu ballamay in la dhaqangaliyo talooyinka kasoo baxa kulanka oo loogu talagalay in door ka ballaaran kan haatan ay ciyaaraan Qurba Joogta Soomaalida ah.